Garaad Jaamac Garaad Cali oo Baaq u Diray Beelaha isku haya Gobolka Bari – SBC
Garaad Jaamac Garaad Cali oo Baaq u Diray Beelaha isku haya Gobolka Bari
Garaad Jaamac oo ka mid ah Isimada ugu Magaca weyn Soomaaliya & Puntland ayaa waxaa uu la soo xiriiray Warbaahinta SBC Isaga oo jooga Magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya si uu baaq nabadeed ugu diro Walaalaha Isku Farasaaray Deegaanada Gobolka Bari.
Garaadka ayaa waxaa uu Baaq Si wada Jir ah ugu diray Dhinacdyada Dirirtu u dhaxeyso ee isku leynaya Aanooyinka & Sidoo kale Cuqaashada Dalka Joogta Inay hakiyaan Colaada Caynkan ah ee u dhaxeysa Dhinacyaadaas.
Garaad Jaamac Garaad Cali waxaa uu xusay in Dagaal aanu wiil ku dhalan Balse wiil ku dhinto Loona Baahan yahay in dadka oodwadaagta ah lakala dhexgalo oo la xaliyo Khilaafaadka Caynkan oo kale ah
Garaadka waxaa uu ku amaanay Cuqaasha La midka ah ee Joogta Deegaanadan inay Arimahan horey u dhaxgaleen isaga oo ugu baaqay in Halkaas laga sii wado oo aan laga daalin sidii dadkan Eebe isgu soo duwi lahaa Quluubtooda
Garaad Jaamac waxaa uu Baaq & Ducoba u diray Dhinacyada Xiisadiihii ugu danbeeyay ay ku dhexmareen Deegaanada Gobolka Bari oo Dhimashada & Dhaawacba keenay waxaana uu sheegay in Dhiiga Walaalaha Qubanaya hadii aan wax laga qaban ay khatar ku tahay Amaanka Deegaanadaas ka jira.
UGu danbeyn garaadka waxaa uu sheegay in iminka isaga uu ka maqan yahay Dalka loona Baahan yahay Isimiada, Cuqaasha, Culimada, iyo maamulka inay Ka qeybqaataan Sidii loo damin lahaa Xiisada isaga oo sidoo kale sheegay inuu docdiisa kala hadli doono ismada Labada dhinac & Bulshada inteeda waxgalka ah sidoo amuurtan wax looga qaban lahaa.
dhuloos ma qaxooti bay wada noqdeen wax garadkoodii xitaa kan ugu sokeeya kenya buu ku qayilaa subxaan waaa dhib waleee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk habar dawaco inay saas wax u cayrin karto ma moodayn
dhuloos cayn iyo harti baa leedahee dunida soo dawirso
Wiil SSC says:
Waan ku farxay maqalka magaciisa ina Garaad Cali. Waayo markuu qoriga qaatay ee uu dagaalka u iclaamiyey ayaa noogu dambeysey meel uu ku nool yahay na kama war qabin. Laakiin inuu nool yahay ayaan ogaaday, waana ku mahadsantihiin mar haddii aad wax uun ka soo qaadeen. Isna waxa lee yahay dadkaagii aad dagaalka gelisay way ku sugayaan si aad u hugaamiso.
Garaad ka waa kaga mahadcelinayaa baaqa nabadeed ee tolka ugu baaqay.
Ka IIDOOR waxaan lee yahay Garaadku nabarada uu idinka gaadhsiiyay nairobi ayaad la kurbanaysaa ee futada isku hay.
Siciidoow hadii aad SSC yahan dhab ah aad tahay Garaadku maamul ayuu inoo sameeyay,Maamulka ayaana masuulka ah xoraynta.Ogoow Madaxdhaqameed inaguma soo duuline.Garaad kuna dagaal kuma dhawaaqine wuxuu yidhi reerkan nagu soo duulayoow hadaydaan dhulkan ka bixin wixii idinka soo gaadha idinkaa ka masuula.
Garaadka waxaan ku leeyahay Magacaa hajiro……